Goethite amethyst, nke a na-akpọkwa cacoxenite amethyst n'ụzọ ezighi ezi - vidiyo
Tags Ametist, Cacoxenite, Goethite
Goethite amethyst, nke a na-akpọkwa cacoxenite amethyst n'ụzọ ezighi ezi
Otu mgbe akpọrọ inclusions ndị a dị ka cacoxenite n'ihi nnabata na-enweghị isi na mmiri ahụ, mana amethyst nwere cacoxenitemay adịghị.
Akpọwo ya cacoxenite na akụkọ ihe mere eme na Brazil. O teghị aka ka emee nnyocha omimi banyere ya ma n'oge ahụ, ọ gafee oge ịgbanwere igwe ahịa na omume ndị mmadụ ịkpọ ya cacoxenite.
Goethite inclusions na-enwekarị ụdị nke ukwuu nke edo edo na agba aja aja na-ele anya dị ka aziza.
Goethite amethyst sitere
Ihe ndi a bu ihe amethyst nke si na Ametista do Sul, nke ana - akpo Sao Gabriel, Rio Grande do Sul, Brazil.
Goethite bụ iron oxygenhydroxide nwere iron nke dị na ya. Ọ bụ akụrụngwa bụ isi nke ọla nchara. Ihe isi ike nke Goethite sitere na 5.0 ruo 5.5 na Mohs Scale, na ike ndọda ya dịgasị iche site na 3.3 ruo 4.3. Mmanụ ahụ na -eweta agịga-eme dị ka kristal, ọla nke agịga, ma bụrụ nnukwu.
Feroxyhyte na lepidocrocite bụ polymorphs nke iron oxyhydroxide FeO (OH) nke kwụsiri ike na ọnọdụ nrụgide na ọnọdụ okpomọkụ nke elu ụwa. Ọ bụ ezie na ha nwere usoro kemịkal dị ka goethite, ihe kristal dị iche iche na-eme ka ha nwee mineral dị iche.
Na mgbakwunye, goethite nwere ọtụtụ polymorphs dị elu na-ekpo ọkụ, nke nwere ike ịdabere na ọnọdụ dị n'ime ime ụwa.
Amethyst bụ odo dị iche iche nke quartz ma nweta ụcha violet ya na irradiation, ọla adịghị mma na n'ọnọdụ ụfọdụ ihe ntanetị mgbanwe ndị ọzọ, yana ọnụnọ nke ihe ndị ọzọ metụtara, nke na-ebute ntụpọ kristal dị mgbagwoju anya. Ihe isi ike nke mineral bụ otu ihe ahụ dịka quartz, si otú a na-eme ka ọ dị mma maka iji ya na ọla.
Amethyst pụtara na isi ihe sitere na obere ọmarịcha pink na-acha odo odo na nke odo odo dị omimi. Amethyst nwere ike igosipụta ụzọ abụọ ma ọ bụ nke abụọ, nke acha ọbara ọbara na nke na-acha anụnụ anụnụ.
Nke nnọọ variable osisi ike, agba nke amethyst a na-ẹkenịm ke n'ọnyá ẹbiet ikpeazụ ihu nke crystal. Otu akụkụ na nkà nke lapidary agụnye n'ụzọ ziri ezi ịcha nkume ebe na agba n'ụzọ na-eme ka ụda nke okokụre mkpuru homogeneous. Ọtụtụ mgbe, nke bu eziokwu na mgbe ụfọdụ, naanị a mkpa elu oyi akwa nke violet agba bụ ugbu a na nkume ma ọ bụ na agba abụghị homogeneous-eme ka a siri ike ọnwụ.
Goethite amethyst si Brazil
zụta ezi amethyst na ụlọ ahịa anyị
Ametist, site Ratanakiri, Cambodia
Tags Ametist, Quartz